Brisbane waa caasimada Queensland iyo waxaa barakeeya A-liiska soo jiidashada sida Badda World, ee cagaarka u wanaagsan oo Jannada South Bank, iyo Buundada Sheekada, iyo qaar kaloo badan - Australia ugu dheer buundada cantilever.
Sidoo kale magaalo hal abuur leh, la tahay matxafyada iyo galleries iyo kafateeriyada dhimatay aplenty, oo lagu daray waxa ay goobtii ugu fiican ee xeebaha Gold Coast, badda, iyo dabaasha.
at 21 kiiloomitir dheer, Ma u adeegi doonaa 18 saldhigyada magaalada oo dhan, iyo dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha si isku mid ah ay awoodaan in ay on iyo sida ay raalli ka bood noqon doonaa.
Ipswich waxay ku taal koonfurta-galbeed ee magaalada weyn ee Brisbane waana meesha aad ka heli doontid Madxafka Tareenka Tareenka ee cajiibka ah.
Brisbane garoonka waa xarun mashquul gaadiidka in uu ka farxiyay soo makhaayadaha sida Fonzie Abbot, baararka sida Transit Tavern, iyo bixiyayaasha la dhigto sida Looking4.com.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-brisbane-train%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)